Fiaraha-miasan’ny Loholon’i Madagasikara Mourad ABDIRASSOUL sy ny Kabinetrany tao amin’ny kaominina Ambanivohitra Ambohitseheno – Sénat de Madagascar
Fiaraha-miasan’ny Loholon’i Madagasikara Mourad ABDIRASSOUL sy ny Kabinetrany tao amin’ny kaominina Ambanivohitra Ambohitseheno
Ho tohin’ny fiaraha-miasa amin’ny Kaominina 25 ao anatin’ny Distrikan’i Manjakandriana dia ny kaominina Ambanivohitra Ambohitseheno indray no nanatanterhan’ny Loholon’i Madagasikara Mourad ABDIRASSOUL sy ny Kabinetrany ny fihaonana voalohany ny 30 jolay 2018 lasa teo.
Vonona ny hampihatra ny fitondrana tsaratantana sy mangarahara ary ny ady aminny kolikoly ny eo anivon’ny Kaominina ambanivohitra Ambohitseheno izay ahitana Fokontany miisa 12 ary mponina 9000 eo ho eo. Ho tohin’ny fiaraha-miasa izay efa notanterahana teny anivon’ny Kaominina maro ao anatin’ny Distrikan I Manjakandriana sy ho fampandrosoana ifotony amin’ny maha mpisolo tena ny Vondrombahoakam-paritra itsinjaram-pahefana ny Antenimierandoholona, dia notanterahana ity fihaonana voalohany ity izay niompana indrindra amin’ny dinik’asa sy fomba fiaraha-miasa ho fanatsarana ny farim-pianan’ny mponina eny anivon’ny kaominina.
Nambaran’ ny Loholon’i Madagasikara Mourad ABDIRASSOUL fa izao fihaonana izao no natao mba ahafahana manara-maso akaiky ny fivoaran’ny fampandrosoana sy ho fijerena akaiky ny olana mianjady amin’ny vahoaka eny ifotony.
Nohamafisin’ny Ben’ny Tananan’Ambohitseheno ANDRIAMBOLAMANA Rivohery Fidison fa vonona ny hiara hiasa amin’ny Loholona ny Kaominina ary ankasitrahany ny fahavonanan’izy ireo hitondra fampandrosoana eny ifotony.
Ny marainan’io andro io ihany koa dia nisy ny fihaonan’ny Loholona Mourad ABDIRASSOUL tamin’ireo mpianatra eny anivon’ny YLTP na ny Youth Leadership training Program andiany faha 14 izay manomana Voyage d’etude any amin’ny Nosy Maorisy, izay nanazavan’ny Loholona ny andraikitra sy ny fomba fintantanana ao anatin’ny Andrimpanjakana.